Ukuhlola umlilo kuyinqubo evamile yemboni yokuthola idatha ye-analytical gold and platinum element (PGE) kusuka ku-ore yezinga eliphezulu. Kuyinqubo eyenziwe yesimanje kodwa ngendlela yayo elula, sekungamakhulu eminyaka isetshenziswa. Ukuhlolwa komlilo kusetshenziswa ekunqumeni igolide kuzo zonke izinhlobo zesampula, okuhlanganisa i-drill core, inhlabathi namasampula e-chip.
Isampula ehlutshiwe iyakalwa futhi ihlanganiswe ne-ejenti eguquguqukayo. I-flux isiza ekuncibilikeni, isiza ukuhlanganisa isampula ezingeni lokushisa elifanelekile futhi ikhuthaze ukuhlukaniswa kwempahla ye-ganggue ezinsimbi eziyigugu. Ngaphezu kwe-flux, i-lead noma i-nickel yengezwa njengomqoqi. Isampula libe selishiselwa esithandweni lapho lihlangana khona futhi lihlukane ‘nenkinobho’ yezinto zomqoqi, equkethe amaminerali ayigugu.
UKUKHISHWA KWEMETALI EBALULEKILE
Uma inkinobho isihlukanisiwe ne-ganggue, izinsimbi eziyigugu zikhishwa kumqoqi ngenqubo ebizwa ngokuthi i-cupellation. Uma inkinobho isipholile, ihlukaniswa ne-slag futhi
• Uma umthofu usetshenziswa njengomqoqi, umthofu ukhipha i-oxidize bese ufakwa ekhabetheni ushiye ubuhlalu bensimbi obuyigugu. Ubuhlalu bube sebuchithwa ku-aqua regia ukuze buhlaziywe.
• Uma i-nickel isetshenziswa njengomqoqi, inkinobho iyachotshozwa bese incibilika ku-hydrochloric acid bese kuthi insalela ihlungwe ukuze kukhishwe izinto ezingaphandle, kushiye insalela yensimbi eyigugu esisefweni.
Igolide ne-PGE kungahlaziywa ngabaningana
UKUMUMVA KWE-FLAME ATOMIC (AA)
• Isampula lichithwa ku-aqua regia bese lishiswa elangabini le-acetylene. Umsebe wokukhanya olingana nowegolide udlula elangabini. Igolide kusampula limunca ukukhanya ngokulinganayo kuye ngokugxila kwe-elementi esixazululweni. Ukumuncwa kuqhathaniswa nezixazululo ezijwayelekile zokunquma ukugxiliswa kwegolide kusampula.
I-PLASMA-ATOMIC EHLANGANISIWE NGOKUHAMBISANA
I-EMISSION SPECTROMETRY (ICP-AES)
• Isampula elinamanzi lishiselwa ku-plasma futhi igolide eliqukethwe kusampula likhipha ukukhanya kumaza wamaza. Ukuqina kokukhanya okukhishiwe kukalwa futhi kuqhathaniswe nesofthiwe nalawo ezixazululo ezijwayelekile ezinegolide. Isofthiwe ke
ibala ukugxiliswa kwegolide kusampula.
I-PLASMA-MASS EHLANGANISIWE NGOKUHAMBISANA
• Igolide eliqukethwe kusampula elinamanzi lifakwe ionini. Ukuqina kwesiginali ku-mass 186 kuyalinganiswa, kanye nezimpawu zanoma yimaphi ama-isotopes angaba nokuphazamisa. Amandla ku-186µ akalwa futhi aqhathaniswe nesofthiwe nalawo egolide elijwayelekile- ezithwala izixazululo zokunquma ukugcwala kwegolide kusampula.
UKUSEBENZA KWE-ISTRUMENTAL NEUTRON
• Okusele kukhishwa ephepheni lokuhluza bese kukhanyiswa kumongo wereactor yenuzi. Izakhi eziningi ziba nemisebe futhi zikhiphe i-gamma- imisebe ye-ray yamaza amaza athile.
Amaza egolide ayalinganiswa futhi aqhathaniswe nezindinganiso zegolide ukuze kunqunywe
ukugcwala kwegolide kusampula.
Igolide nge-screened metallics fire assay liqukethe ukuhlola u-500g wesampula kuma-microns angu-106. Ingxenye yokuhlanganisa iwukuhlolwa komlilo ukuze kutholwe igolide futhi ukuhlolwa okuyimpinda kwenziwa kungxenyana yokususa. Isisindo sengxenye kasayizi, okuqukethwe kwegolide okuyingxenyana eqinile kanye nengqikithi yegolide kuyabikwa.
Thintana: Tina@llxtl-china.com 0086-13975373459
PHAMBI Izici ze-Fire Assay Method
Indlela yezithako zokuhlola umlilo OLANDELAYO